Yini ukucabanga umnikazi ngothando lapho uzuza isilwane? Zombhede, indlu kanye leash - kuba yizinto ezincane ezidingekayo, kodwa okubaluleke kakhulu kusengaphambili ukuthola udokotela abanekhono uzoqapha isilwane sakho kusukela zisencane size siguge. Yini okufanele uholwe umnikazi? Indawo engalapho ekhaya, kungenzeka zibeke reception umile, ayimi, izindawo ezinhle kungakanani abakwaziyo kanye nokuhlola, yebo, khona odokotela abanekhono. Veterinary Clinic "Umngane" (Perm) kuhlanganisa zonke lezi zinzuzo, futhi lokhu wathola ukuqashelwa nothando abantu bomuzi.
Uma kuqala waba umnikazi inja noma ikati, ke kungenzeka wawungenawo isikhathi uqaphele wonke umthwalo. Ebhekene nazo esingathí sina zokugula isilwane, umuntu uqala ukuyiqonda ukuthi kunzima kangakanani ukuqaphela izimpawu futhi sithathe izinyathelo ezidingekile. Abakwazi ukukutshela lapho kubuhlungu, ngakho iphathwa isilwane - lena umsebenzi onzima kakhulu futhi enesibopho. Veterinary Clinic "Umngane" (Perm, Russia) - akuyona nje esibhedlela kahle, kodwa futhi ube yindawo lapho njalo elinde onguchwepheshe oqeqeshiwe. Enough isilwane ukuziphatha phansi zabonakala zingasho lutho engavamile ukuza ukwelulekwa. Ukuhlola i kudokotela onolwazi oluthé ngokushesha ukuchaza konke.
Inethiwekhi imitholampilo wezilwane
Wazalelwa elinento eyodwa wezilwane umtholampilo udokotela othandweni ngomsebenzi wakhe. Manje ezingaphansi kwayo isebenza abafundi eziningi nabalandeli, futhi bazinikezela ugcine izilwane uhlala. Lona omunye imitholampilo best Perm nesifunda Perm. Njalo udokotela njalo lidlule ukuqeqeshwa okwengeziwe, khona izingqungquthela, okuvumela ukuba ukuhambisana izikhathi. Kuyinto isikhungo kuphela yezokwelapha izilwane, okuyinto libhekene ezikhethekile kakhulu, uphethwe multidisciplinary oluyokwenza isikhathi ukuhlonza izimbangela zesifo futhi usize isilwane sakho ukubhekana nalesi sifo.
Amakheli inethiwekhi kwemitholampilo:
Komsomol ithemba, 76.
Turgenev emgwaqweni, 12.
Str. UCatherine, oneminyaka engu 216.
Street Soldatov, 36.
Veterinary Clinic "Umngane" (Perm) emakethe cishe engu-20. Kuyinto inethiwekhi elikhulu enikezela ngemisebenzi yezinga eliphezulu. Amagatsha ngobukhulu abasebenza izinsuku eziyisikhombisa ngesonto, amahora angu-24 ngosuku, kukunikeze ikhono ukucela usizo ngesikhathi uma sidingeka ngempela. Ukwamukelwa (ngaphandle uma kunesimo esiphuthumayo) wenziwa ithuba. Lokhu kusindisa kokuba ahlale kulayini.
Veterinary Clinic "Umngane" (Perm) yasibamba abaqhuba udokotela isilwane esithile komthamo wokuqala. Lokhu kuthumela Ochwepheshe, ihlaziya ukwaziswa okutholakala futhi esabela ukwelashwa. Kulokhu, ukulawula inqubo yenziwa ikakhulukazi odokotela. Njalo ekuseni, uya babonisana, lapho odokotela bezilwane angaxoxa izimo ezinzima futhi ukunquma indlela yokuphatha kuchutjekwe neluhlelo lwekwenta. Lokhu kusiza kakhulu ukuthola indlela ngqo nesimo esinzima, lapho isinqumo zokuphila kuncike.
Izinsiza kusebenza kanye kusebenta kwahulumende base umtholampilo
Omunye izikhathi ezibalulekile. Ngokusekelwe kulokho odokotela uzokwenza izivivinyo kanye iziphetho main mayelana nesimo umzimba? Yiqiniso, ngeke icabange amathuluzi kanye nedatha kusukela lab. isizinda Technical siqukethe ultrasound kanye-X-ray mshini, kwamakhemikhali analyzer igazi nezinye izinto oluyokwenza ukuxilonga izifo ngokunembile.
Inethiwekhi imitholampilo wezilwane idume imishini yayo, ukuvumela afeze ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe kakhulu kwenhliziyo. Ukuze wenze lokhu, lapha ukuchitha cardiogram futhi Doppler. Ngo nasezimweni ezinzima kakhulu, ungase ibhekane i-MRI, okuzokwenza kungenzeka ukuxilonga emgogodleni, ubuchopho, amaphaphu namathambo. Izifo esiswini nemizimba angaphandle emphinjeni - lena isizathu esivame kakhulu ukwelashwa wezilwane. Kukhona fibrogastroscopy, okuyinto ikuvumela ukuba ngokushesha ukuthola imbangela futhi unciphise isilwane sakho nokuhlupheka.
Asinakuwushalazela elabhorethri uwuhlomele kahle. Bavumela ukuba wenze ezihlukahlukene izivivinyo, ezisukela ukuhlolwa okusheshayo kuya kokulukhuni efakwe. Ezinye zazo kungenzeka ukuthi uzimisele, ngisho ngenkathi use-reception.
amayunithi Steel kanye esibhedlela
Kuhle kakhulu, uma ungazange uphathe ukubamba 'service' emitholampilo ezincane, lapho ngokushesha ngemva kokuhlinzwa abanikazi isilwane wanika ezingalweni zakhe. Okufanele ukwenze, indlela yokunakekela isidalwa esibi - konke ayikaziwa. Kusasa izofika ngo yokwamukela - futhi zonke. Nokho Umtholampilo "Umngane" kungaba ozibongayo imishini yesimanje elikuvumela ukwenza imisebenzi eyinkimbinkimbi kunazo. Ngemva kwalokho, izilwane afakwa esibhedlela, ifakwe air conditioning futhi bafudumale. Ngamunye unikezwa slot, futhi udokotela njalo nokwenza izindlela.
Izibhedlela zihlukaniswe bodwa, ingabe kuyinkazimulo ukuba izinja namakati. Ukuba khona yisivikelo ivumela eceleni aqukethe izilwane ngezifo ezithathelwanayo. Aviary ubanzi kakhulu futhi ukhululekile, isilwane ngasinye emva kokuba disinfected ngokugcwele. Yokuhlanza jikelele egumbini kwenziwa nsuku zonke nge magciwane okuphoqelekile okwenziwa ezikhungweni izindonga nezixazululo ezikhethekile. Kvartsevanie, ngokuvumelana ihluzo jikelele, evimbela ukukhula kwamagciwane ayingozi.
Isevisi "iwashi wezilwane" kusiza ukuqinisekisa ukuthola usizo oludingekayo nganoma isiphi isikhathi sosuku noma ebusuku. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ezimweni eziphuthumayo, uma ukuhlinzwa kuphela ongasindisa isilwane sakho. Ukuhlinzwa kuhilela castration futhi inzalo, kodwa ngisho nangaphambi le misebenzi elula udokotela kufanele uthintane umnikazi sendlela ukulungiselela isilwane futhi bembamba esibhedlela.
ukuhlinzwa besisu, iziyaluyalu umgogodla kanye nokwethuka - lawa izindawo elehlukile, a lot of ukunakwa nayo ikhokhwe. Ukuze ngamunye wabo asebenze eminye Ochwepheshe abazinikele ukusiza isiguli ngasinye. Ikakhulukazi eziningi amazwi okubonga kusayithi umsindo ngokumelene odokotela abahlinzayo, ngoba akhawunti nasezimweni ezinzima kakhulu bona.
"Umngane" - umtholampilo multidisciplinary, alinikela uhla egcwele services. "Ihora vet" - ingenye amasevisi adumile ugcine inqwaba yabantu nsuku zonke. Ngaphezu kokuthola ibhuku elisetshenziswa ngokwabelana, ungafaka lokugoma isilwane sakho futhi igawula, okuzebenzisa ultrasound noma x-ray umshini.
Veterinary umtholampilo "umngane" emgwaqeni. Turgenev Yaziwa esibhedlela zalo ezinhle. Lapho uzothola indlela noma yisiphi isilwane, futhi izonikeza izimo esihle ukutakula. Ukululama yokugula okunzima - kuba umsebenzi obalulekile, okuyinto angakwazi ukusingatha kuphela udokotela abanolwazi. Uma wenza kanjalo usuku lonke emsebenzini futhi akukho elinye lithwale isilwane sakho kwi-nqubo, ukulishiya esibhedlela lapho uzothola ukunakekelwa ehloniphekile.
Ngingathanda uqaphele amazwana umsebenzi odokotela nabahlengikazi abasebenza emitholampilo esibhedlela emgwaqweni. Turgenev. Ngakho ukushisa kakhulu anika iziguli zabo ezincane nezinkulu, ukuthi ngezinye izikhathi musa ngisho ufuna ukuya ekhaya ngemva kokwelashwa.
Ukwelapha - iyona ebaluleke kakhulu bezilwane. Kudingeka uqoqe esitfombeni olulodwa yonke idatha isimo isifuyo, iziphetho abanekhono. Umtholampilo emgwaqeni. Ekaterininskaya, 216, esiyingqayizivele umsebenzi dermatologists ochwepheshe ongakusiza ekulweni izimo eziyinselele kakhulu. kuyatholakala ezikhungweni zocwaningo: trihoskopiya futhi ezisicasulayo, amasampula cwaningo tsistologicheskoe, inoculation of dermatophytoses. Lokhu inhlolovo kusisiza ukuba sibone isithombe esigcwele.
Kwezinye izingcweti ungathola wenhliziyo kanye wamazinyo, kudokotela wezifo zamehlo. Umtholampilo at ul. Soldatov, 36, ehlanganisa eminye: ithola endocrinology futhi isazi sezinzwa, ivelakancane kule ochwepheshe wezilwane.
Indlela yokukhipha i-Kaspersky uma ukhohlwe iphasiwedi yakho: ezinye zezindlela ezilula